Inqatha yePinapple - Iintyantyambo​ - Mzantsi Afrika
Inqatha yePinapple okanye i-Ananas Lily
I-Pineapple Flower iyimifuno engapheliyo; Ingcambu yombumba, i-10 cm ububanzi kunye neplati kwisiseko kunye neengcambu ezininzi ezimhlophe. Amagqabi acinezelekileyo aphantsi komhlaba; Malunga neshumi elinesibini. Ityebile ephakathini, umda uguqulwa kwaye unqabile. I-Inflorescence yi-raceme eninzi, kunye neentyantyambo zihlala kwiiveki ezininzi emanzini. Iintyatyambo zezityalo ngoDisemba.
I-Pineapple Flower ikhula kwiSneeuberg, iSithili sase-Tinarha, iHogsback ukuya eKwaZulu Natali, apho ikhula ukusuka konxweme ukuya kwiDrakensberg. Iyakwandisa nge-Basutoland kunye ne-Orange Free State ukuya kwingingqi yaseGauteng kunye namaphondo azungezile.
Kukho iintlobo ezilishumi zePinapple Flower eMzantsi Afrika kuquka i-Eucomis undulata kunye no-Eucomis autumnalis.
I-bulb yePineapple Plant inetyhefu kodwa isetyenziswe ngamachiza eMzantsi Afrika kwinyango ye-enemas, uqaqnjelwa ngumqolo kunye nokuphulukana kwamafutha. Ezinye iindlela zonyango ziquka iingxaki zochamo, isisu, izifo, umoya, ukuguquka, i-hangover kunye ne-syphilis